Siyaasadda - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Maarso, 2014, 11:53 GMT 14:53 SGA
Al-Shabaab, ayaa sheegtay in deegaanka Buulo-Mareer oo ay iyadu ay maamusho ay ku soo dhacday diyaarad nooca meesha fog laga hago oo Maryakanku leeyahay.
Xasan Sheekh: Siyaasadeydu waa midnimoMaqal04:31
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shheegay in dowladdiisu ay ka shaqeyn doonto midnimada Soomaaliya.
18 Mey 2013
Axmed Sabriye wuxuu la 70 jirsaday SYLMaqal06:21
Axmed Maxamed Sabriye waa dhakhtar deggan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. Waxa uu ka warramaya dhalashadiisi oo ku beegnady maalintii la aasaasay ururkii leegada ee SYL, oo markii la aasaasay watay magaca SYC, laakiin markii danbe loo beddelay SYL. 18 Mey 2013
Sideed u aragtaa xaaladda Kismaayo?Maqal54:01
Waa doodda barnaamijka Waxay ila tahay.
17 Mey 2013
Wasiirka Warfaafinta, Isgaarsiinta, Boostada,iyo Gaadiidka dowladda Federaalka Soomaaliya mudane C/laahi Ciilmooge Xirsi, ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho heshiis kula saxiixday hay'adeeda ICAO ee Qaramada Midoobay.
16 Mey 2013
Muranka maamulka hawada SoomaaliyaMaqal05:17
Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka John Kerry, ayaa uga digay Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Asad in ay noqon doonto xisaab qaldan haddii dowladdiisa aanay kasoo qeybgalin wada xaajoodka lagu dhameynayo khilaafka dalka Suuriya.
14 Mey 2013
Madaxweynaha dalka Mareykanka, Barack Obama, ayaa sheegay in Mareykanka iyo Britain ay ku heshiiyeen in la kordhiyo cadaadiska saaran maamulka Suuriya si loo aqbalo mustaqbal aanu ku jirin Madaxweyne Bashar al-Asad.
13 Mey 2013
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland, Faysal Cali Waraabe, oo ka jawaabayay eedeeynta dowladda Somaliland ee kulankiisi Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay inay ahayd salaan keliya.
Fallaagada Libya oo shidaal dhoofiyay